Alaab-qeybiyeyaasha Trichosanthin, Soo-saareyaal, Dhoofiyeyaal ka socda Bolise
[Muuqaal] cad ilaa ku dhow cad
Ku saabsan Trichosanthin
Trichosanthin waa daawo kuleylka-ka-qaadista iyo yareynta bararka.
Trichosanthin waa borotiin ribosome-inactivating ah iyo nooc ka mid ah borotiinka aasaasiga ah ee laga soo saaro xididdada dhirta cucurbitaceae ee nooca generic trichosanthes kirilowii trichosanthes kirilowii, oo ka tirsan nooca bo Ribosome Inactivating protein (Ribosome Inactivating Proteins, RIPs). Waxay la mid tahay 56% silsiladda A - ee silsiladda laba-laaban ee RIPs2 Ricin protein (Ricin). Trichosanthin waxaa caafimaad ahaan loogu isticmaalaa daaweynta cudurada ku dhaca habdhiska cudurada haweenka sida shaqada soo saarista. Intaas waxaa sii dheer, firfircoonida N2 glycosidase, Trichosanthin wuxuu biyo shuban karaa N2C glycosidic bond ee adenosine oo ku yaal booska 4324 ee 28SrRNA ee ribosomes ee unugyada eukaryotic, taasoo ka dhigeysa ribosomes inaan la soo celin karin oo sidaas awgeed looga hortago isku-darka borotiinka.
Daraasaduhu waxay muujiyeen in Trichosanthin uu leeyahay saameyn xakameyn ah ku kordhinta DNA-da ee unugyada kansarka. Fayraska HIV iyo fayrasyo ​​badan oo kale, waxay leeyihiin heerar kala duwan oo ka hortag ah. Trichosanthin ayaa la muujiyey inay dhaawacayso DNA-da unugyada burooyinka waxayna u horseedi kartaa apoptosis. Trichosanthin ayaa sidoo kale la muujiyay inay yareyneyso halista infekshinka HIV iyadoo lagu soo rogayo xakameynta dusha sare ee unuga.